Dhibaatooyinka tifaftiraha qoraalka: Microstation V8 ee Vista iyo Windows 7 - Geofumadas
Dhibaatooyinka tifaftiraha qoraalka: Microstation V8 ee Vista iyo Windows 7
Nofeembar, 2010 Microstation-Bentley
Wakhti yar ka dib, noocyada dhaxalka ee Microstation V8 ayaa jiray intii u dhexeysay sanadka 2001 (V8.1) iyo 2004 (V8.5). Si kastaba ha noqotee, sida qalab kuwaas oo si fiican ugu habboon dadka isticmaala ee bixiyay -waan fahmi karnaa- haysto liisanka ama waxay sameeyeen shaqadooda u gaarka ah Arjiga Aasaasiga ah (VBA) ama Luqad Horumarinta Microstation (mdl), waxay diidaan in ay u dhintaan dhadhanka dadka isticmaala.
Guud ahaan, marka aad u wareegto Windows Vista ama Win7, Microstation caadi ahaan way socotaa. Dhibaatooyin aad u xun oo aad u xun ayaan arkay, inkastoo ay caddahay inaan ka hadleyno kaliya Microstation; Juqraafi ayaa leh nooc kale lix iyo toban.
Mid ka mid ah dhibaatooyinkaas ayaa ah tifaftiraha qoraalka (Sida badanaa waxay dhacdaa marka aan cusbooneysiino Internet Explorer si aad uhesho version cusub). Markaad labadiinaba ku dhejiso qoraalka ama furfurista amarka, daaqada way muuqaneysaa, laakiin ma ogolaato in la beddelo. Sababta ugu weyn ee tan, waa in maktabadaha ay daabacaadyadani isticmaalaan qaybaha WYSIWYG ee tifaftiraha codsiga DHTML (DHTML Editing Component for Applications) in hadda Vista iyo Windows 7 laga saaray sababtoo ah waxay sababeen u nugul Internet Explorer.
Qaar ka mid ah xitaa waxay xuseen in Microstation V8 uusan sii shaqeyn doonin Vista, kali cusub oo cusub sida V8.9 (XM) ama 8.11 (V8i). Laakiin dhab ahaantii waa inaad ku rakibtid codsiga Microsoft oo la yiraahdo Qeybta Editing Editing. Tani waxay u shaqeeyaa nooc ka mid ah ActiveX, taas oo aan ujeedo aragti ah, laakiin codsiyada macaamiisha, iyo taas oo u ogolaanaya horumarinta isticmaalka kaankani inuu la mid yahay noocyada cusub sida Access 2003.
Waxaad ka baxaysaa cinwaanka:
Kadibna waa la rakibay oo diyaarna ah, Microstation V8 wuxuu ku noolaan karaa dhowr maalmood oo dheeraad ah.
Post Previous«Previous gvSIG: Mawduucyada 36 ee Shirka Sixth
Post Next Aan ku soo laabano tayadaNext »
10 Jawaab "Dhibaatooyin la leh tifaftiraha qoraalka: Microstation V8 ee Vista iyo Windows 7"
JAIRO AGUIRRE isagu wuxuu leeyahay:
Agoosto, 2019 at
HADDII UU HARO ...
WAAD KU MAHADSAN TAHAY DHAQANKA ...
Maarso, 2016 at
Awesome! Waad ku mahadsan tahay!
Janaayo, 2016 at
Waad ku mahadsantihiin wax badan oo ku saabsan waxtarka ... iminka waan edbin karaa qoraalo mar kale ... mahad !!!
rafael mayan isagu wuxuu leeyahay:
Janaayo, 2015 at
Waxaan ahay dhowr maalmood ka dib fariin soo socota ayaa soo baxday
waa kombuyuutarku leeyahay awood-u-dallacsiinta. Waxqabadka MicroStation ayaa laga yaabaa inuu ka fiicnaado haddii qallafsanaantu ay naafo tahay. Isticmaal qalabka kombiyuutarka ee kombiyuutarka ee kombiyuutarka si aad u awooddo ama u lumiso qalabka xoqidda.
Ines isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay, saaxiibkay, waxtarkaaga, wixii faahfaahin ah ee aanu ku jirno adeeggaaga oo dhan
Marc Miquel isagu wuxuu leeyahay:
Aad ayaan uga mahadcelinayaa xalinta dhibaatada tifaftiraha qoraalka ah ee iga qaaday seddex cisho oo tijaabo ah, illaa aan go'aansaday inaan ku waydiiyo internetka.
arturo ignacio olivares isagu wuxuu leeyahay:
Diseembar, 2012 at
Waa hagaag ... Waa inaanan wax dhibaato ah qabin.
waaar carias zepeda isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa in aan waydiiyo sida loola tacaalayo warqadaha sawirrada UTM si ay ugu foorarsato gps-ku iyaga oo qorsheyaashana u diyaar ah
Tafatiraha saaxiib, waxaan dhibaato ku qabaa menu ugu weyn ee Microstation Waxaan arkay in dhibaatadani tahay inaad soo dejiso cinwaan ah oo aan horey u sameeyay oo aan ku rakibay mashiinkayga, laakiin waxaan wacaa microstation waxaanan guji tifaftiraha qoraalka oo aan ku rakibay nidaamkaan . Ii sheeg haddii aan ka tallaabay tallaabo sababtoo ah kiniin aan ka ahayn Mashruuca Guud ayaa la bilaabay. Caafimaadka qoyska.